Askari Mareykan ah oo madaxa looga jiro oo 17 qof oo rayid ah ku diley Afgaanistan – SBC
Askari Mareykan ah oo madaxa looga jiro oo 17 qof oo rayid ah ku diley Afgaanistan
Askari ah ka mid ah ciidamada Mareykanka oo madaxa looga jiro iskuna buuqay ayaa weerar amxaqnimo ah oo wuxuu ku laayeey 17 qof oo ah rayid oo u dhashay Afgaanistaan iyadoo weerarkaasi uu sidoo kale ku dhaawacay shan qof oo kale.
Askarigan oo magaciisa aan wali shaacin ayaa subaxnidii hore ee saaka wuxuu ka tagey saldhig ciidamada Mareykanku ku leeyihiin gobolka Kandahar isagoo sita qori boobe ah oo ay uga dhaansan yihiin rasaas fara badan, wuxuu dhexgaley deegaan ay degan yihiin shacab ah isagoo rasaas ooda iga qaaday dad rayid ah, isagoo ninkaasi toogasho ku laayey qof kasta oo ka soo hor baxa waxaana uu laayey dadkii ku sugnaa ilaa iyo sadex guri sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka.
Dhacdadan argagaxa leh ee uu ku kacay Askarigan waxaa lagu macneeyey ninkaasi oo buuq iyo isla hadal madaxa kaga furmay, waxaana saraakiisha ciidamada NATO ay sheegeen inay dhacdadan baarayaan.
Saraakiisha Mareykanka waxay ka bixiyeen raali galin dhacdadan oo ah mid soo laa laabatey oo shacabka reer Afgaanistaan loo geysto dil iyo weeraro.
Dhacdadan waxay ku soo beegsamayaa iyadoo dalka Afgaanistana iyo dunida Islaamka ay si weyn uga caroodeen falal ay ku kaceen ciidamada Mareykanka oo dab qabadsiyey Kitaabka Qur’aanka Kariimka taasi oo rabshado ka kicisay gudaha wadanka Afgaanistaan iyo wadamo kale.
Dad goob joogayaal ah oo ku sugan magaalada Kandahar ayaa u sheegay wakaaladaha wararka in askariga Mareykanka uu rasaas ooda uga qaaday sadex guri oo kala duwan oo ku taal tuulada Alkozai ee gobolka Kandahar.
Askariga ayaa markii uu ku kacay falkaasi wuxuu isku dhiibay ciidamada Mareykanka, iyadoo dadka dhintey iyo kuwa dhaawacmayba ay ka mid yihiin caruur iyo haween.
Talaabadan waa gaboodfalkii ugu dambeeyey falal ay kula kacayaan ciidamada NATO ee ku sugan wadanka Afgaanistaan dadka rayidka ah, kuwaasi oo sheegtey inay dalkaasi u tageen sidii u caawin lahaayeen dadka reer Afgaanistaan oo ay ka dulqaadayaan heeryada Taaliban & Al-qaacida, balse dadka siyaasada indha indheeya ayaa ku tilmaamay arimahan xadgudubka bini’aadamtinimada iyo diintaba ku ah kuwa meesha ka saaraya wixii ay sheegteen in ciidamadaasi u tarayaan dadka reer Afgaanistaan.
Gubista kibaatka munasalka ah diinteena Islaamka ee ay ku dhaqaaqeen ciidamada Mareykanka ayaa si weyn loo cambaareeyey taasi oo ah xadgudub aad u weyn oo dhanka diinta ah.
Kibaatada qur’aanka ee ay gubeen ciidamada Mareykanka iyo caradii ka dhalatey gudaha wadanka Afgaanistaan.
Dhibkaas Ayey Leeyihiin aJnabiga GaaLada aH
Mar Dhaw Heerkaas Waanu Gaari Doonaa Hadaan
Hada Laga Hor Tagin Fikrada ah NabaD IlalinTa